ပြန်လည်အသုံးပြုကစားစရာများပြုလုပ်ခြင်း - The Magic Flute! | လက်မှုပညာ
ပြန်လည်အသုံးပြုကစားစရာများ - The Magic Flute!
Dunia ဆန်တီယာဂို | | လက်မှုပညာ, ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ
ငါတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုအများဆုံးသဘောကျဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုက ကစားစရာအရုပ် ဂီတပါဝင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဖိုးတန်ကစားစရာဖြစ်ရန်အမြဲမလိုပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံလုပ်ရလွယ်ကူဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများကိုအများဆုံးကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူထားသောကစားစရာများကစားခြင်းနှင့်ကလေးများအားဖျော်ဖြေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ကစားစရာရင်ဘတ်တွင်သူတို့ကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောက်ရိုးများ၊ ကောက်ရိုးများ၊ ကျူပင်များသို့မဟုတ်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ချင်သမျှကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောအရာဖြင့်ပုလွေကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုစူပါမားကတ်တစ်ခုခုမှာရောင်းကြတယ်။ သင်ပုလွေကိုသင်လိုချင်သမျှများများလိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကောက်ရိုးလေးချောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ၁၂ လုံးဖြင့်ဖြစ်စေပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကောက်ရိုးများအပြင်တိပ်သို့မဟုတ်တိပ်အနည်းငယ်ကိုလည်းသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာကော်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်တိပ်ခွေကိုရွေးချယ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုလုံခြုံသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ သငျသညျကိုမွငျနိုငျသကဲ့သို့ငါတို့တစ်စုံတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ယခုငါတို့ပုလွေအောင်ကြကုန်အံ့!
ကောက်ရိုးကိုယူပြီးတစ်ခုစီကိုယခင်ထက်နည်းနည်းလေးတိုအောင်ဖြတ်ရတာလွယ်ပါတယ်။ ဒါကိုတိုင်းတာတဲ့မင်းကိုသုံးနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အားလက်တဆုပ်စာအထိ (ကောက်ပဲသီးနှံများကိုသင်လိုချင်သမျှများများ) ရရှိသည်အထိကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိပ် (သို့) တိပ်ခွေအလွှာတစ်ခုကိုထည့်ပြီးကောက်ရိုးများကိုသေချာစွာတပ်လိုက်သည်။ ၎င်းကို၎င်းတို့အားချိတ်ဆက်နိုင်ရန်တိပ်ဖြင့်ခြုံလိုက်သည်။ အဲ့ဒီဟာရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ကလေးများလက်မှုပညာ: အဆိုပါပျံနမ်း
ဓာတ်ပုံ - Snsk24
ရင်းမြစ် - Snsk24
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ » ပြန်လည်အသုံးပြုကစားစရာများ - The Magic Flute!